7 shay oo lagu kala garto Kibirka iyo Kalsoonida - MURAAYAD.COM
Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is leeyihiin maxaa iska galay kibir iyo kalsooni; balse ma jiro qof isku kalsoon oo aan lagu eedaynin isla weynan sabatuna waxay tahay; dadka aan isku kalsoonayn qaar kamid ah ayaa isku daya inay isku kalsoonaadaan saas darteed waxay bilaabaan matalad sidii qof isku kalsoon oo kale.
asalka kalsoonida iyo asalka kibirku waa laba shay oo lid isku ah marka inaan isku qaladno waxaa keena inaynaan si fiican u eegin kadibna midka inoo fudud aan lasoo boodno taasoo keenaysa inaan qof kalsooni oo kali ah muujinaya aan ku eedaynno isla waynan ama qof dadka iska waynaysiinaya la yiraah qofkaaas wuu isku kalsoonyahay.
asalka kibirku wuxuu ka yimaadaa waxa afka qalaad lagu yiraah “insecurity” ama isku kalsoonaan la’aan halka kalsoonidu ay ka timaad hubanti uu qofku is hubo sida awooddiisa, quruxdiisa caqligiisa iwm.
Maxaa lagu kala saari karaa?
Si aan u kala garanno calaamadahan ayaa u dhexeeya.
● Isla weynanku waa serayn weerar ah oo qofku ismoodayo inuu ka muhiimsan yahay dadka kale, halka kalsoonidu ay ka timaad ishubid iyo inuu qofku aamino awooddisa iyo go’aanadiisa.
● Dadka islawayni waligood ma qirtaan qaladkooda taas badalkeedana waxay raadiyaan qof ay ku eedeeyaan wixii ay qaldeen. Halka kan isku kalsooni uu qirto qaladkiisa raali galinna ka bixiyo sidoo kalena uu cashar ka barto.
● Qofka kibirsan ama islawayn wuxuu u dhaqmaa sidii asagoo ka sareeya dadka. Kan isku kalsooni uu ogyahay inay jiraan dad ka sareeya, kuwa ka hooseeya iyo kuwa la simanba.
● Dadka islaweyn aad ayey u faanaan hadiiba ay jiraan wax ay qabteen iyo awoodoodo iyo horumarka ay gaaraan dadka ayey ugu faanaan.Dafka isku kalsoon uma baahno faankaas.
● Dadka islawayni dadka kale ayey hoos u dhigaan waanay xaqiraan wax qabadka dadka kale sababtoo ah xanuun ayey dareemayaan hadii ay muuqato in laga caqli ama awood badanyahay. Kuwa isku kalsoon hoos uma dhigaan mana yasaan dadka.
● Kuwa isla wayn kuma fiicno wada shaqayn, maadaama ay xaqirayaan dadka oo ay waxqabadka dadka kale hoos u dhigayaan; waxaa adkaanaya in lala shaqeeyo, fashil ayey ku dhamaadaan shaqooyinka uu boos muhiim ah ka hayo qof isla wayni halka kuwa isku kalsoo ay noqaan hogaan aad u fiican iyo dad la jecelyahay in lala shaqeeyo.
● ugu dambayn kibirku cabsi shaqsiyadeed iyo ishubanti la’aan ayuu ka dhashaa halka kalsoonidu ay ka dhalato lidka taas oo ah in qofku uu hubo heerka awoodiisa, garashadiisa iyo natiijada oo uu qiyaasi karo.
Sida loola dhaqmo qofka kibirsan ama hadiiba adiga aad tahay qofka isla weyn sida aad bulshada caafimaad qab ula noolaan lahayd waxaan ku eegi doonnaa qormo kale.
Hadii aad xiisaynaysid fadlan faallo (comment) ku qor hoos dalab dheeraad ah ayaad codsan kartaa waanuna kula wadaageynaa wixii awoodeenna ah.